Articles | Puntland Vision - Part 2
Caruurta oo la sheegay inay caqliga badan ka dhaxlaan hooyada kaliya
May 29, 2017 By PV News Desk Leave a Comment
29 May (Puntland Vision)--Hidda sidaha hooyada (genetics) ayaa qayb way ka qaata xariif nimada ama caqli badnaanta ilmeheeda, sidaasi waxaa lagu sheegay cilmi baaris muddo lasoo waday. Waxa sidoo kale la sheegay in aabbahu uusan wax is bedel ah ku lahayn caruurta. Dumarka ayaa inta badan caruurtooda u gudbiya hidda sidayaasha caqliga sare maxaa yeelay hidda sidahaas waxaa … [Read more...]
Cilmi Baaris: Baastada oo la sheegay inay caafimaadka u wanaagsan tahay
February 13, 2017 By PV News Desk Leave a Comment
13 February (Puntland Vision)-- Jilaa caan ah oo Talyaaniga u dhashay, Sophia Loren, ayaa horay u lahayd halqabsi ah, waxa jirkayga dhisnaan ka muuqata waxaa sabab u ah baastada ama Isbageetiga. Daraasad cusub ayaa oo lagu soo bandhigay kulanka sanad laha ah ee ay lahaayeen bulshada aadka u cayilan “ The Obesity Society” , waxaana lagu sheegay in dadka qabatima ama … [Read more...]
AN ETHIOPIAN THINK TANK MISSES THE POINT ON SOMALIA January 23, 2017 By Liban Ahmad The report published by the Addis Ababa-based Centre for Dialogue, Research and Cooperation on the impending presidential election in Somalia has touched a raw nerve. It raises more questions about Ethiopia’s interests in Somalia than how the Somali political classes are sharing power … [Read more...]
Sidee loo noqdaa waalid wanaagsan (Q.1-aad)
January 15, 2017 By PV News Desk Leave a Comment
15 January (Puntland Vision)--Shabakadda Puntlandvision.com oo aad uga barateen maqaallada bulshada danta u ah, waxay maanta idiin soo gudbinaysaa qaybtii koowaad ee taxane gaaban oo la magac baxay Sidee loo noqdaa Waalid Wanaagsan. Inaad noqotid Waalid wanaagsan waa mid kamid ah guulaha ugu wanaagsan ee nolosha laga gaaro, laakiin maahan shaqo iska sahlan. Si aad u noqotid … [Read more...]
Sawirro:-Dhibaatooyin Soo Wajahay dadkii u reer guuraaga ahaa ee u guuray gobolka Bari.
January 4, 2017 By News Desk Leave a Comment
04 January (Puntland Vision):–Deegaanadii dhawaan laysugu tagay ee Roobabku ka da,een ayaa waxaa laga soo sheegayaa inay ka dilaaceen xanuuno dadkii saf ka maray kuwaas oo ay kamid tahay Jadeeco,Malaariya iyo Xanuuno kale oo dadka ku cusub sidoo kale Xoolihii ay wateen ayaa iyaguna waxaa lagu arkay xanuuno ay kamid yihiin Sanbab,Dhugato iyo xanuuno kale oo neefku afka dhiig ka … [Read more...]